Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2752 - 2753 | XperimentalHamid
funda Isahluko 2752 - 2753 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
UMelba waziva eneentloni kwaye enomsindo akuva le nto.
Enentloni, uCharlie wayenentloni ngokwaneleyo ukuba athenge iimpahla zakhe, kwaye ngoku wabuza malunga noku ngqo ebusweni, okwamenza waziva eneentloni.
Into ecaphukisayo, uCharlie, yintoni le ayithengayo! Nokuba yatyhila ngokugqithisileyo, okanye kwakunzima ukuyinxiba. Ngoku ukuba umtya osemva komzimba ophezulu usaxhonyiwe emzimbeni, uziva ungonwabanga kwaye unganyamezeleki.
Nangona kunjalo, uMelba wayesazi ukuba ezi yayizimpazamo zikaCharlie. Nokuba ebenomsindo entliziyweni yakhe, ebengenawo umsindo ngaye, andithethi ke ukuba ubusindisile ubomi bakhe kwaye ungumsindisi wakhe.
Ke, wayenokuluma nje imbumbulu aze athi: “Oko… oko… kulungile…”
UCharlie ubuze engazi, "Uqinisekile ukuba kulungile? Ngaba bonke bawile? ”
UMelba wayeneentloni kakhulu, kwangaxeshanye wabuza emangalisiwe: “Wena… wazi njani…”
Waxolisa kancinci uCharlie wathi: “Ngokwenene akunjalo. Ndithenge ndingakhange ndicinge. Bekufanele ukuba ndizise ezikhulu kodwa ndathenga ezincinci…
UMelba wajika wabomvu, wayengafuni ukuqhubeka nokuxoxa ngesi sihloko noCharlie.
UCharlie wakhupha i-un3rwear awayeyithengile epokothweni ngeli xesha. Wayefuna ukuhamba amnike, kodwa waziva ukuba kuya kuba yinto engaqhelekanga ukubamba i-un3rwear ngqo kwabanye, ke wayibeka etafileni isidlo sangokuhlwa. Ukutyhala phambi kwakhe, wathi ngendlela elihlazo: “Le yinto entsha. Ndithenge ngabom ubukhulu bayo obukhulu. Ungathanda ukuya kwigumbi lokuhlambela uyokutshintsha ngoku? ”
UMelba akazange aphuphe ukuba uCharlie angayifumana epokothweni yakhe wakhupha enye into engaphantsi kwempahla!
Kwaye eyamothusayo nangakumbi kukuba le yangaphantsi yangaphantsi yaba luphawu alubonayo xa wayesemotweni!
Oko kuthetha ukuba uCharlie uthe unento afuna ukuyenza, kodwa uye wayokundithengela iimpahla ezingaphantsi. Iingcinga zakhe zangqamana nam… ”
Ukucinga ngale nto, uMelba washukunyiswa ngesiquphe.
Wayengalindelanga ukuba uCharlie angabacingela.
Ngeli xesha, wayenentloni nyani, kwaye wakhawuleza wabamba ingubo yangaphantsi enganxibanga uCharlie wayityhalela, wema, waphaphatheka kwaye
uthe, “Enkosi, Mnu. Wade…” Emva kokuba ethethile, ungxamile waya ebhokisini. Kwindlu yangasese.
Ukhulule impahla enganxibanga i3 engalinganiyo ngesona santya sikhawulezayo, kwaye amanqaku amalungu adibeneyo ngasemva ayebonakala kakhulu.
Wayengakwazi ukulinda ukuba alahle le nto inganxitywanga emgqomeni wenkunkuma, kodwa kwavela ingcinga engqondweni yakhe, emenza ukuba aqonde ukuba le yayiyimpahla yokuqala anganxibanga yona uCharlie ayinike yona neyokuqala awayeyifumene ebomini bakhe. Iqhekeza le-un3rwear elinikezwe yindoda
Ke, wasonga le und3rwear ngendlela engendawo wayithatha wathi cwaka.
Emva koko, wakhupha uCharlie owayesanda kuthenga. Ngeli xesha, ubungakanani babulunge kakhulu, obamenza waphefumla ukukhululeka.
Uvakalelo lwangaphambili lwalufana nobukhulu beenyawo ezingama-40, kodwa ukuhamba yonke imini kubungakanani bezihlangu ezingama-35.
Emva kwemizuzu embalwa, xa aphuma kwigumbi lokuhlambela, wonke umntu wayephelele.
Ngaphambi koku, wayelumke kakhulu, engazange alinge nokwenza manyathelo makhulu, kwaye imeko yakhe yayimbi kakhulu.
Kodwa ngoku, ubungakanani bezi zimpahla zisandul 'ukuthengwa nguCharlie zilunge kakhulu. Emva kokuyitshintsha, zonke iimvakalelo ezingathandekiyo kunye neemvakalelo zacinywa ngephanyazo, zenza ukuba kube lula kakhulu.
Emva kokuphuma, wahlanganisa iimpahla zakhe ezitshintshiweyo ngezandla emva, esoyika ukubonwa nguCharlie.
Oku ikakhulu kungenxa yokuba ilokhwe kaChanel awayeyithengelwe nguCharlie yayingenayo ipokotho, ke wayengazi ukuba uyibekaphi ilokhwe, ukuze ayiphathe emqolo kuphela.
Ebona uCharlie, uMelba wathi eneentloni: “Mnu. Wade… enkosi kakhulu… ”
UCharlie wancuma kancinci wathi: “Kulungile, ingaba kufanelekile ngeli xesha?”
UMelba uhlazekile wanqwala.
Ngeli xesha i-un3rwear ilingana ngokugqibeleleyo.
Kodwa akazange abe neentloni zokuyithetha ngokuthe ngqo.
Ngenxa yoko, wayenokuhlisa nje iinkophe kancinci, kwaye wathi ngokungaqhelekanga: “Mnu. Wade, ndicela ubala isixa-mali esipheleleyo esisetyenzisiweyo, ngokuqinisekileyo ndiza kukuhlawula xa ndifumana ithuba! ”
UCharlie wawangawangisa isandla sakhe: “Phakathi kwam nawe. Akunyanzelekanga ukuba ube nembeko. Ndikwangumphathi wakho wexesha elizayo, ke ngoko ndiza kuyithatha njengesipho esitshayelelayo. ” UMelba wayeneentloni ngakumbi kwaye wacinga ngaphakathi: “Kulungile ukunika iimpahla njengesipho, kodwa istckings kunye nengubo yangaphantsi. Luhlobo luni lwento… ”
Kodwa emva kwenye ingcinga, ukuba akasasokoli, lo mbandela uza kugqitywa ngoku, kodwa ukuba kufuneka abuyisele imali kuCharlie, lo mba ulingana nokuthi awukapheli.
Ngale nto ibangela iintloni, wayefuna ukuyiguqula ngokukhawuleza okukhulu, kwaye engafuni kuba naziphi na ii-sequels.
Ngokukhawuleza wathi ngombulelo: “Kuba utshilo uMnu Wade, ke… ngoko andizukuziphatha kakuhle kuwe.”
Emva kokuthetha, wajika ngokukhawuleza wazifihla iimpahla ngeloxesha. Ngaphambi koko, wehlisa intloko yakhe wabuyela esihlalweni sakhe.
Ngeli xesha, uPollard wavula umnyango wathi ngoncumo: “Ndiye ndaya kuyibona, andazi ukuba mandithini. Umnumzana Orvel ucebise ngezitya ezimbalwa, kodwa andiqinisekanga ukuba ikulungele na ukutya kwakho. ”
UCharlie wancuma wathi, “Ukutya apha kunencasa. Ukuba uziva ungathandeki, ungayalela enye into. ”
Njengoko watshoyo, u-Orvel wangena ngeebhotile ezine zeMoutai Liquor emashumi amathathu eminyaka, ngentlonipho. Uthe: “Master Wade noNjingalwazi Watt, nina nobabini niza kusela ezi bhotile zine kuqala, kwaye ndiza kuzisa ezinye ukuba anonelanga!”
UPollard ungxamile wathi: “Owu, Mnumzana u-Orvel, andinabo utywala obuninzi. Xa ndandimncinci, ndandinokusela i-catty okanye kunjalo, kwaye ngoku ziyi-taels ezintandathu okanye ezisixhenxe. Ngaphezu, le Moutai ineqondo eliphezulu. Isiqingatha nje sekati… ”
Encumile u-Orvel: “UNjingalwazi Watt, nangona obu tywala bunabantu abaninzi, kodwa awunakuyeka ukubusela, ungabuvula uphinde usele ezinye iiglasi!”
UPollard wayekwimo entle ngakumbi, kwaye uqhubeke wathi “Kulungile! Emva koko sela ezinye iiglasi! ”
UCharlie weva ukuba uthathe inyathelo lokugalela iglasi yewayini emhlophe kuPollard nakuye, emva koko wayalela u-Orvel: “Mnu. Orvel, ungazilungiselela iziselo uMiss Watt. ”
I-Orvel kanye malunga nokuyifumana, uPollard uthe ngalo mzuzu: “Melba, uCharlie ngumsindisi wakho, ungasela nawe, ukumenzela nje iikomityi ezimbalwa!”
UMelba uthandabuza, emva koko wanqwala wathi, “Kulungile. Tata. ”
UCharlie ukhawulezile wathi: “UMelba akakaphumli ngokwaneleyo, masikhe sifumane ibhotile yewayini ebomvu.” Ngokukhawuleza u-Orvel wathi, “Kulungile Master Wade, ndiyahamba ngoku.”
UMelba ejonge uCharlie ngombulelo, uthe: “Mnu. Wade, ndiza kusebenzisa iwayini ebomvu ukukuhlonipha kamva! ”
UCharlie wancuma wathi: “Sesisizukulwana esinye, ngoko ke musa ukuba nembeko phakathi kwethu kwixesha elizayo, ndibize nje ngegama, kuzolunga.”
UMelba wanqwala kancinci, wathi: “Ukususela ngoku, ndiza kukubiza ngokuba nguMongameli Wade emsebenzini, kwaye ndiza kukubiza ngegama lakho ngasese.”
UCharlie wancuma kancinci akathetha.
Emva kokuba u-Orvel ehambise iwayini ebomvu, uPollard wathatha iglasi yewayini wathi kuCharlie: “Charlie, le ntombazana yam ligazi lam lodwa. Ndizakunika iglasi noMelba, enkosi ngenceba yakho esindisa ubomi! ”
UCharlie waphakama ngokukhawuleza, wathatha iglasi, wathi: “Malume uzimisele, sukuthi enkosi, yonke le nto ikwiwayini.”
Ngokukhawuleza uPollard wathi: “Ewe! Konke kule wayini, yiza, ndiqale ndiyenze ngokokuzithoba! ”